Ka dib markii gaadhista ee Tooth ah u saamaysay Bloomington MN
Ka dib markii gaadhista ee Tooth ah u saamaysay
Ha ku dhibin boogta. Haddii xirxirida qalliinka loo dhigay, daa. pack wuxuu ka caawiyaa in ay sii iliga bandhigi. Haddii uu qarbudaada ama dhaco ma heli welwel.
Qaar ka mid ah dhiig ama guduud ka candhuufta waa caadi mudo ah 24 saacadood. Dhiigbax dheeraad ah taas oo keenta in afkaaga si degdeg ah dhiig buuxinta si joogto ah loo xakameyn karaa by qaniinay la cadaadis on suufka faashad si toos ah kooxda kaalinta on nabarka dhiig muddo 30 daqiiqo ah. Haddii dhiig sii fadlan wac u hesho tilmaamo kale.
Barar waa dhacdo caadi ah qalitaanka ka dib,. Si loo yareeyo bararka, codsan bac baraf ah ama boorso balaastig ah ama shukumaan buuxsamay xabadaha baraf on dhabanka aagga qalliinka. Codso barafka sida ugu badan ee suuragal ah in 36 saacadood ee ugu horeeya.
Waa in aad bilaabi qaadashada daawooyinka xanuunka sida ugu dhaqsaha badan aad dareento suuxinta degaanka xiran off. Waayo, xanuun meel dhexaad ah, 1 ama 2 Tylenol ama 1 Tylenol Xoog dheeraad ah waxaa laga yaabaa in 3-4 saacadood kasta. Ibuprofen (Advil, Motrin) laga yaabaa in lagu qaaday halkii Tylenol. Ibuprofen iibsaday mafrashka ku yimaado 200 mg kiniin: 2-3 kaniini laga qaadi karaa 4-6 saacadood kasta sida loogu baahan yahay xanuunka. Waayo, xanuun aad u daran, daawada laguu qoray waa in la qaato sida lagu faray. Daawadaan waxaa laga qaaday ka dib cunista wax oo la galaas oo biyo ah.
Af nadaafad waa muhiim in bogsashada wanaagsan. afkaaga nadiifi si fiican cunto kasta laga bilaabo maalinta qalliinka ka dib ka dib markii. ilkaha caday sida ugu fiican ee aad kartid. Raaci biyo diirran oo cusbo (1 qaado yar oo cusbo ah iyo koob biyo diiran) lix jeer maalintii. Continue nidaamkan ilaa bogsiinta waa dhameystiran.
XUSUUSNOW: boogta A nadiif laftuna si wanaagsan iyo si dhakhso ah.
Ka dhig jimicsiga in ugu yaraan si degdeg ah ka dib markii qaliin. Haddii aad tixgelinayso inaad jimicsi, taagan ama dhiig laga yaabaa inuu dhaco. Haddii ay taasi dhacdo, waa in aad joojin jimicsiga. La soco in aad qaadashada cuntada caadiga ah waa la dhimay. Jimicsiga aad ku buriyaan laga yaabaa in. Haddii aad hesho iftiin madax, jooji jimicsiga.